University of Technical Berlin - Study Engineering ee Germany
University of Technical Berlin
University of Technical Berlin Details
gaabinta : TUB
aasaasay : 1946
Ardayda (qiyaastii.) : 3200.
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Technical Berlin
Qor at University of Technical Berlin
Iyada oo ku dhowaad 34 000 ardayda, Ergo 100 madoyinka iyo 40 Machadyada, Jaamacadda DTU taariikhiga ah ee Berlin waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn farsamo oo ugu caalami ahaan caan Germany ee. Waxay ku taallaa magaalada Germany ee - at wadnaha ee Europe - guulaha fiican ee cilmi-baarista iyo waxbarashada, xirfadaha howl gabka si ay u qalin fiican, iyo maamulka adeega-oriented casri ah sifaha University of Technical Berlin.
kala duwan oo ka mid ah adeegyada ay bixiyaan our toddoba kulliyadood u adeegta si loo hirgaliyo link gaar ah u dhexeeya sayniska dabiiciga ah iyo farsamo on gacanta ka mid ah, iyo qorshaynta, dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada iyo culuumta oo dhinaca kale ah. kani waa guul weyn jaamacad kasta oo farsamo.
nidaamo Kuwani heli hadal la taaban karo ee ku xeeran 40 Bachelor iyo 60 Barnaamijyada Master ee. Qaar badan oo ka mid ah runtii waa gaar ah. University of Technical Berlin waa jaamacadda kaliya ee maadooyinka qurbaan injineernimada gobolka caasimadda.
archivements sayniska noocan oo kale ah waxaa lagu dhisay on cilmi aasaasiga ah ee nidaamo sayniska dabiiciga ah ee kimisteriga iyo physics, iyo xisaabta, marka lagu daro si adag cilmi-abuurnimo-oriented in injineernimada korontada iyo cilmiga computer tusaale ahaan ah. Tu Berlin ayaa helay aqoonsi guulihii fiican in nidaamo oo dhan, kuwaas oo, taas oo taageero waxaa bixiya Initiative Excellence ee Federaalka Jarmal iyo Dowladaha State, Cilmi-German ee Foundation (DFG), Midowga Yurub, warshadaha iyo maalgelinta dawladda, oo ay kooxaha ay wadaan cilmi-heer caalami ah.
Mid ka mid ah waxay daliil cad waxqabadka iyo horumarinta firfircoon ee jaamacadda waa korodhka in maalgelin dibadeed mashaariicda cilmi ay ka 125 million euros in 2009, in Ergo 179 million euros in 2014. Muddo sanado ah, Tu Berlin ayaa kaalinta sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya ee Germany oo aan dugsiga caafimaadka.
In dhigoodu cad ee jaamacadda DTU ee ujeeddooyinka Berlin, July 2012 Senate Waxbarashada si wadajir ah ay go'aansadeen in ay si firfircoon kor aragti cusub ee cilmi-baarista iyo tacliinta by naqshadeysan lix mudnaanta cilmi asaasiga ah iyo iyada oo qeexaysa karnimada la xiriira iyo waajibaadka bulshada.
Solutions for Bulshada Caqabadaha.
Our Meelaha Codsiga Key
Qalabka, Design iyo Warshadaha
Energy Systems iyo Management Resource Sustainable
Kaabayaasha iyo Mobility
Aqoonta iyo Systems Isgaarsiinta
Qorshaynta iyo Maaraynta
Habsocodsiinta faa'iido iyo Products
Waxbarashada iyo Abuuritaanka Meelaha New Job
A siyaasadda ballan awood istiraatiiji hubisaa horumarinta waara kibirka in diciplines muhiim ah.
Beyond xuduudaha u gaar ah, labadaba gudaha iyo dibadda, our jaamacad waa motor ka, bilaabaha iyo faa'iideystayaasha shabakadaha waxbarasho iyo xirfad badan oo la-hawlgalayaasha ee sayniska iyo warshadaha. gaashaanbuur Strategic oo badan oo hawlaha bilowga u adeegi si kor loogu gacan-ku-aqoonta iyo technology kala iibsiga.
ciyaartoyda Global sida Siemens, Telekom German, Daimler, Vattenfall
ama E.ON ay ku lug leeyihiin mashaariicda kala duwan ee co-operative la noo jaamacad iyo si firfircoon kor technology iyo kala iibsiga aqoonta. The 14 kuraasta cilmi iyo dhowr machadyada la jaalka ah ayaa sidoo kale xasuusin ah sumcad extramural fiican tu Berlin ee. Shirkadaha ma bixiso kaliya maal-, Waxa kale oo ay bixiyaan gacan-ku-tababarka iyo taageero ardayda badan la deeq, taxane muxaadaro, iyo fursado xirfad shaqo wanaagsan ka qalin. The Deutsche Telekom Innovation Laboratories waa mid tusaale fiican kasbashada dadka sida. Himiladooda waa si ay u qabtaan cilmi shirkadda isgaarsiinta iyo waxay damaanad dhowr kuraasta tu Berlin. The Campus tu ayaa guriga ahayd in guriga 'shaybaadhka' tan iyo markii 2004, halkaas oo ku dhawaad 360 khubaro iyo saynisyahano ka badan 25 quruumaha ka yar saqafka isla shaqeeyaan.
Sida actor muhiim ah Berlin iyo Brandenburg ee heer caalami deegaanka sayniska, Tu Berlin eegista kor xirka sayniska. Waxa intaa dheer in hawlaha waxbarasho ee caadiga ah, ku dhowaad 60 of our top-uruursanayey cilmi jimicsi hawlaha maamulka ee machadyada cilmi extramural. Kuwaas waxaa ka mid Society Fraunhofer ah, Ururka Leibniz ah, Ururka Helmholtz iyo goobaha kale cilmi muhiim ah oo si cad u maal-galiso.
Jaamacadda Farsamada ee Berlin qabsadey muhiimadda ugu weyn ee horumarinta billowga-ups iyo lataliyaha-offs sayniska ku salaysan oo siinaya hanuun iyo kormeer ku dhowaad 40 sannad kasta bilaabi-up dadaallada. Waxa kale oo ay u adeegtaa sida magnet ah shirkadaha danaynaya in ay isu la dhiso on ama meel u dhow naga campus. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka dalka competi-ta aan kasbadeen horyaalka "jira jaamacadda bilaabi-up".
Caalami yahay mabda'a aasaasiga ah ee dhammaan hawlaha sayniska. istaraatijiyad caalami jaamacadda ee dhaqmayso fikradda ah iskaashiga istaraatiijiyadeed la jaamacadaha top-uruursanayey dibadda. Kuwaas waxaa ka mid tu Warsaw, tu Trondheim, Tu Delft iyo tu Vienna. iskaashiga Kuwani u adeegaan si ay u dhiirigeliyaan iskaashiga ballaadhan ku salaysan iyo si kor loogu qaado hawlaha wadajirka kala duwan ee cilmi-baarista iyo waxbarashada. A block dhismaha dheeraad ah waxay ka kooban tahay iskaashiga istaraatiijiyadeed hay'adaha sayniska ee saddexda gobol bartilmaameed ee Yurubta Bari, South-East Asia iyo South America. Tu Berlin hadda bixisaa 26 Barnaamijyada dual-degree in lala jaamacadaha lammaane ee England, France, Poland, Shiinaha, Russia iyo Chile, marka lagu daro 17 Barnaamijyada Master af-Ingiriisi ee. ardayda International ka badan 130 wadamada ka samaysan oo ku saabsan 20 boqolkiiba ee jirka ardayga. In ka ciidmada Alexander von Humboldt, Tu Berlin ayaa haatan ka dhigeysa dalka oo dhan jaamacadaha farsamo labaad. statistics kale oo dheeraad ah uu hoosta ka xariiqo hab interna-waxbarasheed ee jaamacadda: Professor tu oo keliya ay ku lug lahaayeen 1500 mashaariicda Cooper-Dhaqso gudba xuduudaha u dhexeeya 2009 iyo 2011. In 2012, ku dhowaad 120 heshiisyada caalamiga ah ee sayniska ku jireen ciidanka heer jaamacadeed dhexe.
Xisaabta iyo cilmiga dabiiciga ah
sayniska iyo injineernimada Hab-
injineernimada korontada iyo sayniska kombiyuutarka
nidaamyada injineer ah oo gaadiidka (oo ay ku jiraan injineernimada aerospace, injineernimada baabuurta, injineernimada badda iyo badda, iyo qorshaynta iyo howlgalka nidaamyada gaadiidka)
Qorshaynta - dhisidda - deegaanka (milmaan dugsiyada hore ee “injineernimada sokeeye iyo geosciences codsatay” iyo “naqshadaha -environment - bulshada”)
Dhaqaalaha iyo maamulka
On 1 April 1879, ah Royal Institute of Technology Charlottenburg (“TH Charlottenburg”) waxaa la sameeyay in ku biirto dawladeed oo ka mid ah Berlin Dhismaha Academy (Bauakademie) iyo Royal Trade Academy (Royal Gewerbeakademie), laba kulliyadaha aasaasay Prussian madaxbannaan oo loo aasaasay in 1799 iyo 1821 siday u kala horreeyaan. The TH Charlottenburg (Royal TechnicalHigher School of Charlottenburg) ayaa loo magacaabay ka dib markii xaafad ka mid ah ay goobta ku Charlottenburgjust baxsan Berlin. In 1899, ah TH Charlottenburg noqday Polytechnic ugu horeysay ee Germany doctorates abaaliyo, sida degree ah heerka qalin ah, marka lagu daro shahaadado, in professor Alois Riedler iyo Adolf Slaby mahad, guddoomiyaha ururka Jarmal Injineerro(VDI) iyo Association ee korontada, Electronic iyo Information Technologies (VDE).
In 1916 the-taagan dheer Bergakademie Berlin, akadeemiga macdanta Prussian abuuray by joolajiga ku Carl Ibraahim Gerhard in 1770 Emaraadka ee King Frederick Weyn, waxaa hayeyna gelin TH Charlottenburg. hore, college macdanta waxa ay ahaayeen, si kastaba ha ahaatee, dhawr sano ee hoos timaada oo ka mid ah Frederick William University (hadda Humboldt University of Berlin), hor intii aan la miiqeen mar kale in 1860. Ka dib markii nuugista Charlottenburg ee Greater Berlin ee 1920 iyo Germany la galay Weimar Republic jeestay, ah TH Charlottenburg waxaa magacooda loo baxshay “Technische Hochschule ee Berlin” (“TH Berlin”). In 1927, Waaxda Geodesy oo ka mid ah Beeraha College of Berlin waxaa daro ah TH Berlin. Inta lagu jiro 1930, ee dibu dhiska iyo ballaarinta campus ku teedsan “dhidibka East-West” ay qayb ka yihiin qorshayaasha Nazi of a World Capital Germania, oo ay ku jiraan macalimiinta cusub ee technology difaaca hoos General Karl Becker, dhisay oo qayb ka ah magaalada tacliinta weyn (Jaamacadda City) ee kaynta Grunewald galbeed falsan xiga. dhismaha Shell weli diiqid ka dib ka dillaacay ee dagaalkii labaad ee dunida iyo ka dib ismiidaamin Becker ee 1940, waxaa maanta la daboolay by the-ballaaran Teufelsberg daadinta.
Qaybta woqooyi ee dhismaha weyn ee jaamacadda ayaa la burburiyay intii uu socday weerar qarax ee November a 1943. Maaddaama ay wadada fightingat dhamaadka dagaalkii labaad ee adduunka, hawlgallada ee TH Berlin ayaa shaqada laga joojiyay sida April, 20th 1945. Qorshaynta ee dib-u-furitaanka dugsiga bilaabay on June, 2nd 1945, mar rectorship ku simaha hogaaminayo Gustav Ludwig Hertz iyo Max Volmer loo magacaabay. Sida labada Hertz oo Volmer ku hadhay ee Hijrooday ee Midowga Soofiyeeti ee qaar ka mid ah wakhtiga soo socda, kulliyadda aan la dib-u-caleemo ilaa April, 9th 1946, hadda sita magaca “University Technical Berlin”. Guud, magaca aan la turjumay luqado kale. dheer Ingiriisi The Berlin Institute of Technology waa tarjumaadda semi-ka rasmiga ah, taas oo la aasaasay sida tanaasul ah in 2007. Si kastaba ha ahaatee, tarjumaadda dareen lehUniversity of Technical Berlin weli ugu badan (inkastoo aan si rasmi ah) magacaabi jaamacadda ee English, marka laga reebo suurto galka ah ee tilmaanta u dhashay Jarmalka (iyo dabcan foomka gaaban tu Berlin).
Ma rabtaa wada hadlaan University of Technical Berlin ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Technical Berlin on Map
Photos: University of Technical Berlin rasmiga ah Facebook
University of Technical eegista Berlin
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Technical Berlin.